Ugaaskii Beesha Xawaadle oo caawa ku geeriyooday Magaalada Muqdisho – AfmoNews
Allaha u naxariistee waxaa caawa Magaalada Muqdisho ku geeriyooday Ugaaskii Beesha Xawaadle, Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada.
Wararka ayaa sheegaya in Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu u geeriyooday xanuunsidaha COVID-19, oo maalmo ka hor uu ku dhacay.
Gudoomiyaha Midowga Musharaxiinta, Shariif Sheekh Axmed ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble.
“Waxaan guud ahaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed, anigoo ka tacsiyeynaya geerida Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, Ugaaskii Beesha Xawaadle oo Magaalada Muqdisho ku geeriyooday. Si gaar ah waxaan tacsi ugu dirayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay Ugaaska, samir iyo iimaan Allaha naga siiyo.” Ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.
Ugaas Xasan ayaa si weyn uga soo muuqday Warbaahinta, ka dib markii uu si adag uga horyimid Dhismaha Maamulka Hirshabelle, xilligii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugaas Xasan ayaan ka hor imaan doorashadii 11-kii bishii November ka dhacday Magaalada Jowhar, laguna soo doortay Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), xilli dadka reer Hiiraan ay qaybtood ka soo horjeesteen, sababtuna ay tahay Ugaaska oo heshiis is afgarad ahi la gaaray Dowladda Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.